တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ May 15, 2016 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 430 Views
ရေးသားသူ: မေးမြန်းချက် > အိုက်စိုင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေ ၁၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ ရ မိုင်ခွဲရှိ K H Hotel တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီများ(ရန်ကုန်) တွေ့ဆုံပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အလွတ်တန်းသတင်းထောက် “အိုက်စိုင်း” တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် ဖြစ်ပါသည်။
မေး ။ ။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စာပေယဉ်ကျေးမှုတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ ဘယ်လို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ အစီအစဉ်များ ရှိပါသလဲ?
တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်(MNA)
ဖြေ ။ ။ တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လို ကူညီပံ့ပိုးရမလဲ၊ တိုင်းရင်းသား တွေ သူတို့ရဲ့ စာပေ၊ သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သူတို့တွေရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကို သူတို့က ကျနော်တို့ဌာနကို တင်ပြရမယ်။ သူတို့ ဘာလိုလားလဲ၊ အဲဒီ လိုလားချက်အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာကူညီပေးရမလဲ။ အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
ကျွန်တော်တို့က သက်သက်မဲ့ကြီးတော့ ဒါလုပ်ပါ ဟိုဟာလုပ်ပါ ဒါထိန်းသိမ်းပါ ကျနော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကနေ ညွန်ကြားတယ် လုပ်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့၊ ဒီနေ့ ဒီရက် ကျင်းပချင်တယ်။ ဒေသ အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ဆီကို အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်။ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာဌာန၊ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကို ဒါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့ ထုံးစံ အမြတ်တနိုးထားတဲ့ ရက်မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျင်းပခွင့်ပြုပေးပါ။
စာပေလည်း ဒီလိုဘဲ၊ သူတို့ရဲ့ စာပေ သင်ကြားချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုမှာပြဌာန်းထားတဲ့ သင်ရိုးညွန်တန်းနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်၊ အခြေခံဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်၊ သူတို့ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင် ခွင့်ရှိ ပါတယ်။ ဘာမှ အနှောက်အယှက်ပြုလို့မရဘူး။ အကယ်၍ အနှောက်အယှက်ပြုခဲ့ရင် သူတို့ ကျွန်တော်တို့ ဌာနကို တိုင်လာရင် အရေးယူရမယ်။
ဥပဒေအရတရားရုံးမှာ ပုဒ်မ ၂၂ ဆိုလိုရှိရင် အဲဒီလူကို ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်နဲ့ငွေဒဏ် တစ်သိန်းဆိုတာ သူတို့ ပြဌာန်းထား တာရှိတယ်။နောက် ပုဒ်မ ၂၃ နဲ့ ညိှလို့ရှိရင် အဲဒီလူကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်နဲ့ ငွေဒဏ် ၂ သိန်းဆိုပြီး ချလို့ရတယ်။ ၂၄ လည်း အဲဒီအတိုင်းဘဲနော်။(တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ-အခန်း ၇-၈ ကြည့်ပါ-အယ်ဒီတာ) အဲဒီအထိ ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့် အထိရှိပါတယ်။ အနှောက်အယှက်ပြုလို့မရဘူး။ သူတို့ကလည်း သူတို့ရဲ့ စာပေ၊ယဉ်ကျေးမှုတွေကို တခြား တိုင်းရင်းသားရဲ့ စာပေ၊ယဉ်ကျေးမှုကို မနှောက်ယှက် ဘူး။ အခြေခံဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင် သူတို့လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
မေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ တိုင်းရင်းသားတွေ မှာ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကဒ်မရတာတွေရှိနေတယ် ခင်ဗျာ၊ ဆိုတော့ သူတို့တွေ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကဒ်တွေ ရရှိ လာရေးအတွက် ဝန်ကြီးတို့ ဌာနကနေ ဘယ်လို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ ရှိပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒါက အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပြည်ထဲရေးနဲ့လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနဲ့ဆိုင်တယ်။သူတို့က တရားဥပဒေ နည်းလမ်းအရဆိုရင် ဒါတွေ စိစစ်ရမှာပေါ့။ ဒီလူတွေက ဧည့်နိုင်ငံသားလား၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိလား၊ သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလား၊ တိုင်းရင်းသားဆို ခဏက ပြောသလိုပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ ရှေးပဝေသတီ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်က အခြေချပြီး နေလာတဲ့ လူမျိုးကိုမှ သူတို့က တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်တာ။
အဲဒီ တိုင်းရင်းသားတွေ အခွင့်အရေးကို ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနကနေမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးတာ၊ ကျန်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဒီမှတ်ပုံတင်ရဖို့ ကိစ္စတွေကတော့ လဝက နဲ့ ဆိုင်တယ်။
မေး ။ ။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းဖို့နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးတို့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ပေးသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကိစ္စရယ်။ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စရယ်ကို ဒီတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန အဆင့်လောက်နဲ့တော့ မရဘူး။ နိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတတို့၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ကနေပြီးတော့ အဲဒီ ဟာတွေကို စုစည်းပြီးတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ရပ်စဲပြီးတော့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတကျ အားလုံး သဘောတူတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမျိုးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကို အစိုးရရဲ့ အကြီးအကဲတွေက ဦးစီး ဦးဆောင်လုပ်မှာရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ပေးတဲ့ အဆင့်ဘဲရမယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ် လုပ်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ သဘောထားတွေ ဘယ်လို ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ စေ့စပ်တဲ့ အဆင့်လောက်ဘဲရတယ်။ ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းရမယ်။ ဒါကို နိုင်ငံရေး အကြီးအကဲ အာဏာပိုင်တွေဘဲ ဖြေရှင်းလို့ရမယ်။
မေး ။ ။ တပ်မတော်က AA၊ MNDAA၊ TNLA၊ တို့ကို NCA မှာ ပါဝင်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် လက်နက်စွန့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောထားတယ်။ ဒါကို အခု အရပ်သား အစိုးရက ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ် လို့ ဝန်ကြီး အနေနဲ့ယုံကြည်ပါသလား?
ဖြေ ။ ။ ဒါတွေကလည်း တပ်မတော်ကလည်း သူတို့ရဲ့ ခံယူထားတဲ့ မူ ၆ ချက်ရှိတယ်။ တပ်မတော်က ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံရမယ်။ တည်ဆဲဥပဒေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောဆိုထားတယ်။ ဒီအဖွဲ့ တွေကို လက်နက်စွန့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောတာကတော့ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အစိုးရ အကြီးအကဲတွေ ညိှနှုိင်းပြီးတော့ ပျော့ပြောင်းတဲ့ နည်းနဲ့ စိတ်ရှည်သီးခံပြီးတော့ ဆွေးနွေးညိှနှုိင်းရ မယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောတယ်။
သမ္မတရဲ့ သူရယ် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)၊တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရယ် တိုင်ပင် ညိှနှုိင်းပြီးတော့ ဒီ နည်းလမ်းက ဘယ်လို လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးရမယ်။ သူတို့က ဒီအတိုင်း တင်းထားလို့ရှိရင် ငြိမ်းချမ်း ရေးက ရမှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အရယူရမယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီရအုံးတော့ ဘယ်လိုမှ မတိုးတက်နိုင်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရတဲ့နည်းနဲ့ ရှာကြံပြီးတော့ ဆွေးနွေးရမယ်။ တပ်မတော်ကလည်း သူတို့ရထားတဲ့ အထူးအခွင့်အရေးတွေ တတ်နိုင်သမှျ စွန့် လွတ်ရမယ်။ စွန့်လွတ်သင့်ရင်လည်း စွန့်လွတ်ရမယ်။ လိုက်ရောသင့်ရင်လည်း လိုက်ရောရမယ်။ အများပြည်သူရဲ့ အကျိုးကို ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်ရမယ်။
မေး ။ ။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တစ်လ၊ နှစ်လ အတွင်းမှာ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို ကျင်းပ သွားနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်တော့ အပစ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ တစ်ကြိမ် တစ်ခါမှ မတွေ့ရသေးဘဲ ဒါကို ကျင်းပသွားမယ်ဆိုရင် ပြည့်စုံမှုရှိနိုင်ပါ့မလား?
ဖြေ ။ ။ သူက(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)ဆိုလိုတာကပေါ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုးတာရှိတယ်။ မထိုးတာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေအားလုံး နိုင်ငံရေးအဆင့်ကို ဒီပထမအဆင့် ဆွေးနွေးမယ်။ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ရှာကြံမယ်။ သူတို့ ဘာလိုချင်လဲ ညိှနှုိင်းမယ်။
ညိှနှုိင်းပြီးလို့ အားလုံး အဆင်ပြေလို့ရှိရင် နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကို သွား၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲတဲ့ အခန်းကဏ္ဍထား လိုက်တော့။ သူ့နေရာသူ ဒီအတိုင်းဘဲ ထားလိုက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍသွားမယ်။ အကယ်၍ နိုင်ငံရေး အခန်းကဏ္ဍ သဘောတူညီချက်ရလို့ရှိရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေက အလကားဘဲ၊ အဓိက နိုင်ငံရေး ပြဿနာ၊ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ဖြေရှင်းလို့ရသွားပြီးဆိုရင် တခြား နိုင်ငံတွေရဲ့ နမူနာတွေရှိတယ်။ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် တစ်ခု တည်းရှိတယ်။
တပ်မတော်ဆိုတာက တစ်ခုတည်းရှိတယ်။ချ င်းတပ်မတော်၊ မွန်တပ်မတော်မရှိဘူး အားလုံး တတိုင်းပြည်လုံး တစ်ခုဘဲရှိရမယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တစ်ယောက်ဘဲ ရှိရမယ်။ သမ္မတရဲ့အောက်မှာဘဲ အားလုံးရှိရမယ်။ ဒါက သူများ နိုင်ငံရဲ့ နမူနာဘဲ အမေရိကန်လို အင်မတန် ကြီးကျယ်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှ တပ်မတော် ဟာ သူတို့ သမ္မတရဲ့အောက်မှာ ပြည်သူရဲ့ အစိုးရအောက်မှာ အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ သူတို့က ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ် ထမ်းဆောင်ကြတယ်။
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မေးမြန်းချက် အိုက်စိုင်း 2016-05-15
Tags မေးမြန်းချက် အိုက်စိုင်း
Previous မိမိဘာသာစကားကိုသာစွဲကိုင်ထားရင် ကမ္ဘာနှင့်ရင်ဘောင်မတန်းနိုင်ဟု တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးပြော
Next မွန်ပြည်နယ် (ဘွဲ့ရ)နေ့စားလပေးမူလတန်းပြ မေလ ၂၃ ရက်တွင် လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမည်